YouTube Music kanaalada ah Artists kala duwan, qaybaha iyo Wadamada
Ma waxaad tahay qof taageere weyn u ah music? Ma waxaad u tagtaa YouTube inay dhegaystaan ​​music si joogto ah? Haddii ay haa tahay, waxa ay noqon doontaa sahlan haddii aad isku qori channels music qaar ka mid ah oo aad ku casriyeeyaa music maalin cusub. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah channels music YouTube talinayaa oo aad bilaabi kartaa in aad ha music aad maalin ka haatan.
Channels music Best of 20 fanaaniinta channels Music ah oo kala duwan qaybaha channels Music ah oo dalal kala duwan
BEST kanaalada muusikada ee 20 fanaaniinta
# 1. Miley Cyrus music channel
Tani Miley Cyrus Music Channel aad ka bixin karto la gabayadii ugu fiican iyo wakhtiga oo dhan ka songs hit jecel oo ka mid ah aad loo jecel yahay Miley Cyrus. Haddii aad jeclaan ah in aad dhegaysato gabayadii Miley Cyrus, markaas taasi Youtube Music Channel waa meesha ugu fiican ee ay noqon.
Tag channel music ah >>
# 2. Justin Bieber music channel
Ha hor istaagina karaa rabitaanka in ay dhagaystaan ​​heesaha Justin Bieber ayaa? Si xor ah u booqo Youtube Music Channel oo waxaad heli doontaa in ay ku raaxaystaan ​​heeso cajiib ah oo Bieber.
# 3. Taylor Swift music channel
Ma doonaysaa in ay dhagaystaan ​​gabayada weyn ee Taylor Swift? Waa hagaag, music channel waxa loogu talagalay adiga! Waxaa ku jira dhammaan heesaha caanka ah ee Taylor Swift in aadan wax iska caabin ah ayaa laga yaabaa.
# 4. Pink music channel
Ma waxaad tahay qof taageere ah oo Pink iyo iyada songs? Waa hagaag, dambe ma aad si fudud u heli karaan, oo maqla inta badan iyada heeso caan ah oo dhex music channel this welwelin!
# 5. Mumford iyo wiilashiisii ​​music channel
Mumford iyo wiilashiisii ​​ayaa heeso gaar ah oo dhan xaq u leeyihiin. Thanks to music channel this, aad haatan ay helaan heeso ay kuu oggolaadaan in aad si xor ah iyaga maqli waayo mar walba aad rabto.
# 6. Nicki Minaj music channel
Dhegayso Nikki Minaj ayaa songs ugu cajiibka. Ka casriyeeyaa dhacdooyinka iyada oo sii daayo music cusub halka riyaaqayaa videos music cabsi badan halkaas oo aad ka heli kartaa oo keli ah YouTube
# 7. Katy Perry music channel
Tani waa fursad aad u dhagaystaan ​​oo ay daawadaan cusub oo ugu wanaagsan videos music ee Katy Perry. Hel music nool ciyaaro jidka oo dhan iyada music channel.
# 8. Rihanna music channel
Hel updates ugu wanaagsan ee la Rihanna ayaa music channel iyo sahamin heeso badan la yaab leh oo videos music ah fanaaniinta aad ugu jeceshahay. Daawo oo dhan videos music kulul mar walba Rihanna ee aad rabto.
# 9. Adele music channel
Iyadoo channel music ah, waxaad daawan kartaa videos iyo dhagaysan songs Adele ayaa mar walba ka mid ah maalinta. YouTube music channel oo keliya ayaa soo Bixiyaa wax waayo-aragnimo ah oo ku haboon, sida xaqiiqada ah in aad u jeclahay.
# 10. Michael Jackson music channel
Wixii taageerayaasha AVID ee Michael Jackson, waxay si fudud u daawan kartaa Michael Jackson channel music ee YouTube. Daawo videos music aad rabto in aad wakhti kasta oo ah maalintii.
# 11. Justin Timberlake music channel
Ku dhawaad ​​2.911.178 shakhsiyaadka ay horeba u jaraaidka channel music this ee YouTube maalmahan. Waxaa qoreysa heesta "Bad waxba" taas oo ah mid ka mid ah heesaha ugu dambeeyay ee Justin Timberlake.
# 12. Drake music channel
Channel music waxa uu leeyahay 2.161, 155 macaamiishu in YouTube xilliga hadda la joogo. Dambeeyay song music video ama in la ciyaari karo waxa ku jira waa "Dabeecadda daran."
# 13. Lil Wayne music channel
Tani waa channel music ah ee YouTube ku jira oo dhan in videos music ee Lil Wayne ka. The video oo ka mid ah sheekooyinka safar dibadeed ee Lil Wayne waxaa laga heli karaa music channel this.
# 14. Lady Gaga music channel
Tani waa mid ka mid ah channels music ugu caansan ee YouTube halkaas oo dhan oo ka mid ah heesaha ugu fiican ee Lady Gaga ayaa laga heli karaa. Waxay leedahay 4.515.576 macaamiishu.
# 15. Beyonce music channel
The music video cad gabayga oo la xaq u leedahay "Barzakh," by Beyonce waxaa laga heli karaa music channel this. Tirada guud ee macaamiishu ay haatan tahay 5.026.933
# 16. Robin Thicke music channel
Channel ayaa music ee Robin Thicke ka kooban yahay videos music isagoo duq ah oo cusub. The noocyo badan oo gabayadiisuna waxay yihiin R & B, hip-hop iyo naf.
# 17. Maroon 5 music channel
Tanu hadda waa fursad aad ku maqli heeso iyo la kulmaan waxqabadka Maroon 5 in ay Maqasho Quluubta malaayiin dad ah oo dunida ku qabtay.
# 18. Carrie Underwood music channel
Waxaa hadda jira fursad inaad maqashaan codka awood badan oo ka mid ah xilli ciyaareedkii afaraad American Idol guusha. Carrie Underwood yahay, runtii, heesaa oo isu run.
# 19. Avril Lavigne music channel
Codka iyo muusikada ee Avril Lavigne maqle ka dhigi doonaa in aad fahamto sababta ugu badan oo ka mid ah gabdhaha iyo wiilasha da'da yar ee jecel muusiga iyo heesaha.
# 20. Mid ka mid ah Direction music channel
Aruurinta gabayadii One Direction ka dhigi doonaa in aad fahamto sababta ay u yihiin mid ka mid ah ugu wanaagsan, caanka ah oo kulul kooxaha band wiil ee jiilka cusub.
Kanaalada MUSIC illi DUWAN
Qoob ka Music
Music Qadiimiga ah
YouTube Channel of Country Music
# 1. Country
Cunid dhagaysiga muusigga ee Dalka ku sifayn, markaas music channel ay wax badan u bixiyaan. Waxaa qoreysa songs dalka weyn in aad sida xaqiiqada ah waa jeclaan doonaa!
# 2. Classic Music Country
Channel music Tani waxay bixisaa songs dalka weyn oo kuwii gabayaaga caanka ah. Haddii aad rabto in aad dhageysto qaar songs dalka nasteexo, markaas music channel tanu waa saaxiibka ugu fiican.
# 3. ACM - Academy of Country Music
Daawo videos iyo qaato ugu sarreysa oo ku saabsan isbeddellada ugu dambeeyey iyo dhacdooyinka ee ACM ama Academy of Country Music. Halkan waxaad ka heli doontaa inaad qaadato ugu sarreysa ilaa taariikhda videos!
# 4. Save CountryMusic
Heeso More iyo ka badan ayaa la gelin doonaa in music channel this. Oo tan, waxaad awoodi doontaa inay ku raaxaystaan ​​songs dalka in aad tahay qof aan maalin walba la kulmi kartaa!
# 5. CountryOnVEVO
Tani waa weli channel kale u fiican music aad ka heli karto songs dalka weyn oo kuwii gabayaaga ahaa iyo fanaaniin kala duwan. Sida xaqiiqada ah in aad la aduuna doono heeso kuwaas.
# 6. Country Music Network
Halkan, waxaad ka heli doontaa in ay dhagaystaan ​​heesaha dalka fanaaniinta caanka ah 'in hubaal in aad neefta ka qaadi doonaa. Channel music Tani si joogto ah la gelin doonaa gabayo ku kalifay in aad rabto in aad doonto in aad ku darto oo aad playlist.
# 7. Country Hadda
Country Hadda music channel waa kan ugu fiican. Tani waa mid ka caga joogsi ugu danbeeyay ee casriga ah iyo heeso dalka iyo dhaqanka. Waa in aad qori waayo, kulli wax dalka weyn!
# 8. Country Music Television
Ma waxaad tahay Cunid songs dalka iyo madadaalada? Subscribe in channel music, waayo, videos television music dalka caanka ah. Waxa aad ka bixin karto videos weyn iyo heeso hubaal waad jecel doonaa.
# 9. Country Music Experience
Tani waa channel music wanaagsan dadka jecel music dalka! Dhegayso heeso ka fanaaniinta dalka kala duwan oo hubaal waad dhergi doontaan.
# 10. dvdman49
Ma doonaysaa in la maqlo qaar ka mid ah dalka dhabta ah iyo music dalka dhaqameedyada? Markaas waa in aad isku qori music channel this. Waxaad ka heli doontaa wax badan oo heeso dalka weyn oo music halkan.
YouTube Channel ee Jazz Music
# 1. Jazz
Waayo, kuwii ku caashaqi jiray of music jazz, waxay si fudud u booqan kartaa Jazz music channel ee YouTube. Ogaaw in aad xor u arkaan in ugu fiican videos track jazz inta aad dhagaysanayso raadkooda.
# 2. Jazz n 'Blues Experience
Marka aad rabto in aad Jazz cajiib n 'waayo-aragnimo Blues, YouTube music channel waa meesha ugu fiican si ay u tagaan. Daawo videos badan addoonsadeen oo dhan cayn kasta oo muusiko jazz.
# 3. Video Houston Jazz siman / Qabooji Music ee
Daawo dheeraad ah oo ah kuwa ugu caansan Houston siman Jazz / music Qabooji videos aad weligeen arag. Ku raaxayso aad jazz siman iyo nasteexo jecel ilaa iyo inta aad rabto.
# 4. Edolutionary
Ma doonaysaa in aad wax badan ka EDolutionary hesho? Iyadoo YouTube music Jazz channel, waxaad sahamin kartaa wax badan oo jazz siman oo lacag la'aan ah ka heestii "soundtrack The".
# 5. Live Small
Ku raaxayso SmallsLIVE ay channel xaq music Jazz ka dhaw raaxadeeda waxa ka mid ah gurigaaga ama meel kasta oo aad. Daawo sida badan videos iyo heesaha caanka ah ugu ciyaaray.
# 6. Jazz Platina
Platina Jazz soo bandhigi doonaa Badmaaxe Moon - A madow Serenade oo aad ka daawan kartaa video ee YouTube music channel. Waxaa hubaal ah, in aad u jecel waxaa marar badan daawaday doonaa.
# 7. DJ Buddy Love - Cool Jazz
Dhegayso abid jazz ka coolest la DJ Buddy Love halkan YouTube music Jazz channel. Isla mar ahaantaa, dejiso halka daawashada cajiib ah videos in kaliya music channel waxa uu leeyahay.
# 8. New Orleans Jazz Fest
Ma waxaad tahay lover ah Jazz Fest? Aad dareento in aad mid ka mid ah dadka ku nool New Orleans Jazz iyo Heritage iid waa sida aad u daawato video ay ku music channel.
# 9. Meel Jazz & More
Ku raaxayso music ku nasatid oo erya jazz siman kaliya ee YouTube music jazz channel. Baro noocyo badan oo ah music jazz iyo iyaga u raaxayn halka daawashada cajaladaha.
# 10. JavaJazzFest
Iyadoo JavaJazzFest music channel, waxaad awoodi doontaa in ay ka faa'iidaystaan ​​fiirinaya Java Jazz Festival 2014 iyo dareemayaa sida aad u noqotay qayb ka mid ah waxaa ka mid ah.
YouTube Channel ee Dance Music
# 1. Planet Dance Music
Tani waa kanaalka music fiican ee dadka jecel caalamka music qoob ka ciyaarka. Waxaa ku jira videos ah, wada hadal, playlists iyo faahfaahin ku saabsan Dance Planet ee Music.
# 2. Electronic Dance Music
Waa channel a music cusub ee YouTube taas oo uu leeyahay 1.458 macaamiishu. Mid ka mid ah dambeeyay videos in laga heli karo ee waa video music of heesta "hoos" by Selena Gomez ah.
# 3. Waxaad jeclaada Dance.TV
Daawo video music of heesta "badan intii ku filnayd" by Marc Korn adigoo booqanaya music channel this. Mid ka mid ah video music ugu caansan ee YouTube in laga arki karaa in music channel tani waa "Jooji Time ee" by burburin.
# 4. Dancemusic Marcellino
In music channel this, dadka had iyo jeer ka daawan kartaa music ugu codsaday oo ugu wanaagsan videos of music qoob by Marcellino. A ruux video clip lacag la'aan ah hadda laga heli karo music channel this.
# 5. Qoob ka ciyaarka music - Mawduuc
Versions Dhawr ka mid ah videos cusub ugu fiican music qoob ka waxaa laga heli karaa in channel music ah ee YouTube. Sannad kasta, music channel this Uploads ah videos dambeeyay music qoob ka ugu fiican in dadka Adduun waa in uu arko.
# 6. House & Dance Music
Channel music Tan waxaa horay u qaadida music video ah ugu danbeeyay ee Rosario Flores kaas oo xaq El Nino De siman Ojos. Dhawr ka mid ah noocyada kala videos music in ay ku jiraan in shaybaar ay remix ayaa lagu heli karaa music channel this.
# 7. Electronic music qoob - Mawduuc
Dhawr ka mid ah noocyada kala duwan ee qoob elektaroonik ah waxaa laga heli karaa in this music channel gaar ah. Mid ka mid ah videos music laga heli karo music channel tani waa Music New Dance Best 2014.
# 8. DJSNOWMASTER1
Baro liiska gabayadii guriga ugu wanaagsan ee sanadkan ay Author in channel music ah ee YouTube. Video music ayaa ka mid ah Songs Top House-Dance waxaa laga heli karaa halkan.
# 9. XERO MAGAALOOYINKA QOOBKACIYAAR
Ayaa aad ugu wanaagsan ee videos Urban Dance Camp ayaa lagu heli karaa music channel this. Tirada guud ee macaamiishu ay wakhti xaadirka la joogo horeba waa 338.311.
# 10. Korontada Music TV
Tani waxaa loo aqoonsan yahay guriga electro channel music ugu weyn ee adduun xilliga hadda la joogo. In music channel this, dadka daawan kartaa videos music ee DJ caansan aduunka ee in ay yihiin kor u qaadida music guriga electro.
YouTube Channel of Music Qadiimiga ah
# 1. Music Qadiimiga ah - Mawduuc
Ugu wanaagsan oo ugu waxtarka videos music ku saabsan music classical waxaa laga heli karaa halkan. Waa channel music fiican ee ardayda music kuwaas oo doonaya inuu u ciyaaro, dhawr tusaale oo music classical in alaabtii muusikada ee.
# 2. ClassicalMusic
Mid ka mid ah channels music fiican YouTube si ay u dardar music classical. Waxay leedahay 3.448 macaamiishu xilliga hadda la joogo. Dadka ku raaxaysan karaan videos music mid ah xubnihii ugu fiican music classical ee Beethoven iyo fannaaniin kale oo caan ah ee la soo dhaafay in music channel this.
# 3. Music Qadiimiga ah
Noocyada kale ee muusiga waxaa laga heli karaa in channel music ah ee YouTube. Laakiin inta badan videos music ay la xiriiraan jazz sida "Sweet Mama" ee Joe Lovano iyo Ed Thigpen.
# 4. Casriga music classical - Mawduuc
In music channel this, casriga ah videos music classical ugu caansan waxaa laga heli karaa oo la heli karo qof kasta. Dhegayso tusaalooyin kala duwan oo music piano by furitaanka music channel this ee YouTube.
# 5. Music Qadiimiga ah
Video The music ee caanka ah Antonio Vivaldi Four Seasons waxaa laga heli karaa music channel this. Duubo The music classical music channel tani had iyo jeer waa in HD buuxa iyo tayada sare leh.
# 6. Ruuxa Music Qadiimiga ah
Tani waa music ah channel ugu wanaagsan ee dadka jecel heesaha classical. Waxaa ku koraan iyo ballaariyo dhakhso haddii had iyo jeer macaamiishu ay wax miiran sida iyo share badhamada in ay interface.
# 7. Classical MUSIC CHANNEL
Videos The music for Polka iyo Wiener Walzer ayaa lagu heli karaa music channel this. Dadka ayaa sidoo kale ku raaxaysan karaan music ee baaruuda boqorkuna music channel this.
# 8. Music Qadiimiga ah
Tusaalayaasha ugu fiican ee symphonies waxaa laga heli karaa in videos music of music channel taas. The guulaha oo ka mid ah composers weyn baroque ee la soo dhaafay ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa halkan.
# 9. ClassicalMusicClub
Tusaalooyin dhowr ah oo xabbadood music piano ayaa la soo bixitaankii by videos music of music channel taas. Qaybaha ugu fiican ee Beethoven iyo Mozart ay joogaan in ururinta of music channel this.
# 10. medicitv
Dadka waxan ka fiirsada sida tirada mid music channel ee music classical ee YouTube xilliga hadda la joogo. Qaybaha ugu fiican ee Claudio Abbado oo ugu weyn fannaaniin Wehbe ka mid yihiin ururinta ugu dambeeyay ee channels music this.
YouTube Channel of Music Hip-hop
# 1. Rap & Hip-hop-
Ma waxaad tahay music xamaasadeysan oo raabka iyo hip-hop ah? Markaas, ka qabi karto in this raabka & hip-hop music channel noqon doonaa kaamil ah oo aad u maxaa yeelay, sida xaqiiqada ah aad ku raaxaysan doonaa dhagaysto boqorkii ah ee ku sifayn.
# 2. A-ONE hip-hop MUSIC CHANNEL
In la cusboonaysiiyaa la coolest a-mid hip-hop music channel. Waxaad hubaal waa jeclaan doonaa channel music this gaar ahaan haddii aad tahay taageere aad u xiiseeya of music hoos noocan ah ku sifayn.
# 3. HipHopMusic - Maalintii oo dhan
Ha hor istaagina karaa jeceshahay inaad la dhagaysan noocan ah hip hop? Markaas uma baahnid inaad ka walwasho, maxaa yeelay, aad si fudud u heli karaan in ay noocan ah ku sifayn dhex music channel this.
# 4. Sphere ee Hip-hop-
Hel helitaanka ah in this music Hip-hop-marayo Sphere ee Hip-hop-music channel oo wuxuu ku raaxaysan aad u firfircoon music. Waxaad hubaal waa jeclaan doonaa channel haddii aad hip run bood xamaasadeysan.
# 5- FREETraffic Hip-hop-
Daal aan dhegeysanno nooca qaar ka mid caajis ah music? Hadda waa waqtigii aad u dhegeysato si nooca noole kasta oo muusiko ah in hubaal qaadi kartaa inaad fiiro oo noqon taageere aad u xiiseeya ee Free Traffic Hip-hop.
# 6. Hip hop WorldStar
Noqo qaxay oo la casriyeeyaa heeso cusub iyo coolest in industry ee music Hip-hop-ka qabi karto iyada oo in ka Hip Hop World Star Music Channel.
# 7. HIPHOPSINCE1987TV
In lagu casriyeeyaa videos music iyo gabayadii HipHop Since1987TV dhex channel music ee HipHop Since1987TV ah. Hubaal waxaad noqon doontaa yaabiyo iyo kaabayaasha dhaqaale la noocaan ah music.
# 8. Marpha hip-hop
Dila aad xiiso iyada oo dhegaysanaya daawanayana u music iyo heeso ka mid ah Marpha Hip-hop-Music Channel. Dhageysiga noocan ah songs hubaal ka dhigi doonaa maalin noole iyo dhaqaaqin.
# 9. OldSchoolHipHopHD
Marna ha ka qaadid naftaada ka daawashada iyo dhegaysiga videos music hubaal dhigay kartaa niyadda ku wanaagsan. Ku raaxayso ah music ee Hip-hop-dhex music ah channel OldSchoolHipHopHD.
# 10. HipHopAvenueTV
Eebihii nadagjiyay guri waxaad dareemi kartaa xumeyn iyo cidlo. Bilow in aad maalin dhegaysiga iyo daawashada cajaladaha music in aad maalin wanaagsan ka dhigi kara. Hubaal waxaad noqon doontaa in niyadda wanaagsan oo diyaar u ah inuu ka yaabsado adduunka.
Imaatinka ugu dhaqsaha badan
Kanaalada MUSIC waddamo kala duwan
Music kanaalada ka: Shiinaha Itoobiya Hindiya Russia Thailand More in ay soo
More in ay soo
Music kanaalada of Music Shiinaha
# 1. CCTV Chinese Music Channel
Noocyada kala duwan ee music sifayn Chinese ayaa la heli karaa in videos music of music channel taas. Tani waa channel music for dadka doonaya in ay ogaadaan waxyaalaha yaabka leh oo muusiko ah ee Chinese ah.
# 2. NTDonMusic
Noocyada kala duwan ee classical music iyo xubnihii music dhaqanka ee Shiinaha waxaa lagu soo bixitaankii by videos music of music channel taas. Piano music Shiinaha iyo music iyo biibiilaha ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa halkan.
# 3. MadePossible
Qaybaha music Chinese ugu quruxda badan waxa ay joogaan interface ee music channel this. Videos music ee heeso ee Shiinaha in ay yihiin embodying music Shiinaha dhaqameedyada ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa in music channel this.
# 4. MadePossible2
In music channel this, ka music dhaqanka Shiinaha waxaa loo aqoonsan yahay nooc ka mid ah music nasashada. Noocyada kala duwan ee dhaqanka iyo muusigga casriga Shiinaha ay joogaan music channel this.
# 5. Chinese Style Music
Tusaalooyin dhowr ah oo xabbadood music Chinese-style iyo heeso lagu heli karaa videos music of music channel taas. Waxay leedahay 14.618 macaamiishu xilliga hadda la joogo.
Music kanaalada of Music Indian
# 1. Sony Music Hindiya
Dhegayso ugu soulful heeso jacayl Indian la Sony Music Hindiya music channel. Plus, waxaad daawan kartaa videos music kala duwan iyo videos heesaha aad ugu jeceshahay.
# 2. Hindiya Music Network
Raadi heesaha oo dhan Indian caan ah oo la Hindiya Music Network oo si xor ah u daawadaan more videos at channel music ay ku YouTube, channel music ee adduunka ugu fiican.
# 3. SonyMusicIndiaVEVO
Ka badan oo ka mid ah videos dhiirigalin ee SonyMusicIndiaVEVO Music Channel Baro. View more videos, oo maqla hits ugu danbeeyay aad ayaa xiiso u qaba inaad maqashaan.
# 4. MTV Hindiya
Daawo ugu fiican MTV xiray ee MTV Hindiya music channel. Tanu waa meesha ugu fiican ee aad ku daawadaan MTVs ugu wanaagsan oo ugu dambeeyay ee taariikhda.
# 5. Vijay faylalka
Wixii dheeraad ah oo ku playlists Vijay Kannan, YouTube music channel siin karaa wax kasta oo aad doonayay. Ka updated la Uploads music ugu caansan u meditations la nooc oo kala duwan.
# 6. Universal Music Hindiya
Daawo Universal Music Hindiya channel trailer iyo aad u hesho yaabeen la hits coolest iyo rimoorka kale laga heli karaa music channel this. Filo in ka badan ka fanaaniinta aad ugu jeceshahay.
# 7. tseriesclassics
In this music channel Indian, waxaad maqli karo iyo daawan Badhawa Shehnai song qalabka by Kailash Rana. Tani classical Indian tago hees cajiib ah in aad dhab ahaan u jeclaan doonaa.
# Sideedaad GreenMusic360
Daawo filimka ugu wanaagsan ee qoob of India xaq Aagayam Polave ​​- Aadalam Boys Chinnatha Dance. Iyadoo GreenMusic360, aad ku faraxsantahay doonaa heeso badan iyo ciyaar aad marna markii hore lahaa.
# 9. Indian Music Hits
Hel wacdaro iyo waxyoonay music ugu fiican Indian in aad dhab ahaantii jeclahay in Qalbigaaga. Tanu waa meesha ugu dambeeysa ee nasashada iyo madadaalada buuxa.
# 10. Dhammaan Indian DJ Music
Iyada oo dhan Indian DJ Music, waxaad daawan kartaa iyo dhegeysan heesaha hit kala duwan iyo videos mar walba aad rabto. Channel music Tani waxay keenaysaa in tayada music iyo videos qof walba.
Music kanaalada of Music Itoobiya
# 1. Itoobiya Music
Channel music Tani Uploads songs Itoobiya oo caan ka fanaaniin kala duwan. Sidaas, haddii aad jeclaan ah gabayo noocani, hubi in aad qori in channel this.
# 2. Lucy Ethiopian Music
Fiiri music channel si ku eegaan songs adag tahay inay helaan oo cusub oo ka Itoobiya. Channel music Tani oo soo bandhigtay kala duwanaanshaha ummadda u qurux badan, iyo sidoo kale heesaha oo qurux badan in ay ku siin karaan.
# 3. Itoobiya Happy
Ma doonaysaa in ay dhagaystaan ​​weyn, ku faraxsan songs Itoobiya? Waxaad u timid inaad meel sax ah. Wixii ku cusub oo dheeraad ah oo Uploads cusub oo music Itoobiya, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inay qori!
# 4. danial630
Channel music waxa uu leeyahay badan si ay u bixiyaan marka ay timaado Itoobiya iyo music heeso cusub. Waxaad awoodi doontaa in la ogaado mid ka mid ah song nooc ka Itoobiya ah!
# 5. Nadeem Ali
Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay ka maqnaan videos iyo heeso kala duwan ka music channel this. Ku raaxayso wax walba oo Ethiopian in channel iyo aad u hesho si ay u helaan songs weyn ka fanaaniinta weyn.
# 6. Ethiopian TV
Marka ay timaado in madadaalada Itoobiya, music channel tani waa khabiir. New videos lagu uploaded maalin kasta sidaa darteed waa in aad daawato ilaa casriyeysan ah!
# 7. hoplessable
Marnaba ma dooneyno inuu joojiyo dhagaysto heesaha oo ka music channel this. Sida xaqiiqada ah waxaad ka heli LSS ee ka mid ah heesaha Ethiopian - songs in aadan maalin walba la kulmaan!
# 8. Itoobiya Music Channel
Channel music Tani waa wax walba oo ku saabsan Itoobiya, naftaada raalli songs madadaalinta ka Itoobiya. Subscribe iyo in aad had iyo jeer la casriyeeyaa heeso ka soo Ethiopian Music Channel.
# 9. addiszefen
Channel music Tani waxa ay noqonaysaa caan ah oo aad u badan iyo tani waa sababta oo ah gabayo Itoobiya la yaab leh in ay qoreysa. Dhegayso songs, kuwaas oo aad marna qoomameyn doono!
# 10. Itoobiya Music
Sidaas, raadinayso Music Ethiopian channel ugu fiican halkaas oo aad dhagaysan kartaa to top of line gabayadii Itoobiya? Waa hagaag, in aad ka fiirsatid Music Itoobiya sida mid ka mid ah fursadaha ugu fiican!
Music kanaalada ah Thai Music
# 1. Channel [V] Music Thailand
In kaabayaasha dhaqaale si artist aad jeceshahay iyo heeso ay. In la cusboonaysiiyaa si music ugu dambeeyay oo ugu qatarsan ee warshadaha music Thailand. Ku bilow maalinta ku helno ka qabi karto in ay Channel [V] Music Thailand.
# 2. Rihanna music channel
Ma waxaad tahay qof taageere aad u xiiseeya oo ka mid ah noocyada kala duwan ee muusiga? Hadda waa waqtigii aad si ay u helaan iyada oo Music Bec Tero ku Channel aad hubaal doonaa in la cusboonaysiiyaa si cusub iyo heeso coolest.
# 3. warnermusicthailand
Daawo oo dhegayso oo dhan aad jeceshahay music, fanaan iyo heeso ay dhex Thailand Music Warner Music ah Channel. Marnaba ma dareemi doonaa caajisin halka daawashada iyo dhegaysiga dhan videos music in music channel taas.
# 4. UMusicThai
Ku dar midabka iyo reyn in noloshaada ay daawashada iyo in aad dhegaysato qaab farshaxan aad jeceshahay iyo heeso ay. Waxaad la cusbooneysiin doonaa heesta cusub iyo coolest in industry music by 'reebi muusikada channel Umusicthai.
# 5. channel [v] music Thailand
Samee maalin dhalaalaya oo la jecel yahay iyagoo dhegaysanaya daawanayana videos music kala duwan si ay wajiga u gelin karaa dhoola. Iyadoo Channel [V] Music Thailand aad ka daawan kartaa, oo maqla qaab aad fanaaniinta kala duwan.
Music kanaalada of Music Ruushka
# 1. Gooldhalinta Music Ruushka
Jooji aad xiiso iyo waqti fiican dhegaysiga iyo daawashada cajaladaha music dambeeyay ee fanaaniinta aad ugu jeceshahay. La soco in gooldhalinta Music Ruush.
# 2. Hot RussianMusic
Ma waxaad tahay qof taageere aad u xiiseeya of music? Haddii aad u jecel daawashada iyo dhegaysiga ugu dambeeyay oo kulul Ruush videos music markaas ay u helaan iyada oo Hot Ruushka Music.
# 3. Qaylada iyo Music tijaabooyin ee Russia
Xamaasadeysan oo Buuq iyo tijaabooyin Music doonaa hubaal jecel 'reebi in channel music Buuq iyo Music tijaabooyin ee Russia. Calan maalinta iyada oo la dhageysto heesaha aad jeceshahay iyada oo channel this.
# 4. Ruushka Indie Music
Marnaba ma dareemi doonaa xiiso haddii aad habayn ee u channel Ruush Indie Music. Samee maalin xiiso leh iyada oo loo marayo dhegaysiga iyo daawashada cajaladaha music jeceshahay.
# 5. shuminfo Ruushka music indie
Fall jacayl iyo rock aad adduunka iyagoo dhegaysanaya daawanayana ay shuminfo Ruush indie music channel. Sida xaqiiqada ah maalintii oo aad mar walba noqon doonto, xoogna oo xiiso leh.
> Resource > YouTube > talinayo YouTube Music Channel ee Artists kala duwan, qaybaha iyo Wadamada